MuditaOS nharembozha nerutsigiro rwemagetsi mapepa skrini yave kuvhurika sosi | Linux Addicts
Darkcrizt | 10/11/2021 15:16 | Yakagadziridzwa ku 12/11/2021 05:45 | Noticias, Free Software
Mudita akasunungurwa kuburikidza ne blog post iyo yatora danho rekuburitsa kodhi yekwa nharembozha MuditaOS, iyo yakavakirwa paFreeRTOS inoshanda sisitimu munguva chaiyo uye yakagadziridzwa zvishandiso zvine masikirini akavakwa nemagetsi bepa tekinoroji (e-ink).
Iyi puratifomu yakatanga kugadzirwa kuti ishandiswe mumafoni e minimalist ane e-mapepa ekuratidzira anogona kushanda pasina kuchaja bhatiri kwenguva yakareba.
Iyo kernel yeiyo inoshanda sisitimu munguva chaiyo FreeRTOS inoshandiswa sehwaro, microcontroller ine 64 KB ye RAM yakakwana pakushanda kwayo. Zvekuchengetera data, iyo yekutadza-inoshivirira faira system yaisanganisira littlefs, yakagadziridzwa nekambani yeARM yeiyo mbed OS inoshanda sisitimu.
Iyo sisitimu inoenderana neHAL (Hardware abstraction layer) uye VFS (Virtual File System), iyo inorerutsa kuita kwerutsigiro rwemidziyo mitsva uye mamwe mafaera masisitimu. Kune yakakwirira-yepamusoro data yekuchengetedza senge bhuku rekero uye manotsi, SQLite DBMS inoshandiswa.
Zvezvinhu zveMuditaOS, tinogona kuratidza zvinotevera:
Mushandisi interface yakagadziridzwa zvakanyanya kune monochrome kuratidzwa kwakavakirwa pamagetsi bepa. Kuvapo kwesarudzo "yakasviba" color scheme (mavara akareruka pane yakasviba kumashure).
Matatu maitiro ekushanda: kunze kwenyika, usavhiringidze uye online.
Bhuku rekero rine runyoro rwevanobvumidzwa.
Miti-yakavakirwa kuburitsa mameseji system, matemplate, madhiramu, UTF8, uye emoji rutsigiro.
MP3, WAV uye FLAC inoenderana mimhanzi inoridza inobata ID3 tag.
Yakajairika seti yemashandisirwo: Calculator, tochi, karenda, alarm wachi, manotsi, izwi rekodhi, uye software yekufungisisa.
Kuvapo kwemaneja wekushandisa kubata kutenderera kwehupenyu hwezvirongwa pane mudziyo.
A sisitimu maneja anotanga pane yekutanga bhutsu uye bhutsu sisitimu mushure mekuisa simba pachishandiso.
Inogona kupetwa nemahedhifoni eBluetooth uye vatauri vanotsigira A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) uye HSP (Headphone Profile).
Inogona kushandiswa mumafoni ane maviri SIM makadhi.
USB-C inokurumidza kuchaja maitiro.
Tsigira VoLTE (Izwi pamusoro peLTE).
Kugona kushanda senzvimbo yekuwana yekugovera Internet kune mamwe madivayiri kuburikidza ne USB.
Interface yekushandura mitauro gumi nemiviri.
Kuwana faira kuburikidza neMTP (Media Transfer Protocol).
Panguva imwecheteyo, kodhi ye iyo desktop desktop Mudita Center, inopa mabasa ekuwiriranisa bhuku rekero uye kalendari scheduler ine yakamira system, isa zvigadziriso, dhawunirodha mimhanzi, kuwana data uye mameseji kubva padesktop, gadzira backups, pora kubva mukutadza, uye shandisa foni senzvimbo dzekuwana.
Chirongwa ichi chakanyorwa uchishandisa Electron chikuva uye chinouya mumagungano eLinux (AppImage), macOS, uye Windows. Mune ramangwana, zvakarongwa kuvhura maapplication Mudita Launcher (digital mubatsiri weiyo Android papuratifomu) uye Mudita Storage (gore kuchengetedza uye meseji system).
Parizvino iyo chete foni yakavakirwa paMuditaOS ndeye Mudita Pure, iyo yakarongerwa kutanga kutumirwa munaNovember 30.
Mutengo wakaziviswa wechishandiso imadhora mazana matatu nemakumi matanhatu uye foni inofambiswa neArM Cortex-M369 7MHz microcontroller ine 600KB TCM ndangariro uye ine 512-inch E-Ink skrini (2.84 × 600 resolution uye gumi nematanhatu mimvuri yegrey), 480 MB SDRAM, 16 GB eMMC Flash. Inotsigira 64G, 16G, 2G / LTE, Global LTE, UMTS / HSPA +, GSM / GPRS / EDGE, Bluetooth 3 uye USB Type-C (Internet uye Wi-Fi kuwana kuburikidza neserura opareta haisipo, asi mudziyo unogona kushanda. se USB GSM modem), uremu 4 gr., Inoyera 4.2x140x144 mm, inotsiviwa 59 mAh lithium-ion bhatiri ine chaji yakazara mumaawa matatu uye mushure mekuibatidza, sisitimu inotanga mumasekondi mashanu.
Kune avo vanofarira iyo MuditaOS kodhi, vanofanirwa kuziva kuti yakanyorwa muC / C ++ uye yakaburitswa pasi peGPLv3 rezinesi. Unogona kubvunza nyora pane iyi link iripazasi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » MuditaOS iyo nharembozha nerutsigiro yemagetsi mapepa skrini yave kuvhurika sosi
Kutumirwa kweSteam Deck kwakanonoka kusvika Kukadzi 2022